နတ်ကလေးရဲ့ ရစ်သမ်: 2007
‘အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ’ ….. ဘယ်ကမှန်းမသိ အသံက ထွက်ပေါ်နေသည်။
ဘယ်လိုဖြစ်လာသည်မသိ။ တလမ်းလုံး သူ့ကြောင့်ဆူညံနေသည်။ အိုးစုတ်ခွက်စုတ်များကို လှည်းပေါ်တွင် တင်တွန်းလာသော လူတစ်ဦး..။ လက်ကလည်း အငြိမ်မနေ။ တုတ်တစ်ချောင်းကိုင်ကာ ထို အိုးခွက်များကို တဖျောင်းဖျောင်းရိုက်နေသည်။ ထူးခြားသည်က ထိုလူ၏ မျက်နှာသည် ပြုံးနေပြီး ချိုသာလှသည်ဟု ထင်ရသည်။ ထိုလူ ဘယ်သူလဲ။ အဘယ်အရပ်က လာသလဲ။ ဘယ်လို အခြင်းအရာများ သယ်ဆောင်လာသလဲ။ မေးခွန်းများသည် လူကိုရူးသွပ်စေပါသည်။ ထို့အပြင် ၀ိညာာဉ်များကိုလဲ ရူးသွပ်စေနိုင်ပါသည်။
ဤနေရာသည် ၀ိညာဉ်အတော်များများ နေထိုင်သော ရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နံနက်ပိုင်း၌သာ လူအနည်းငယ် ဖြတ်သန်းသွားတတ်ပြီး ညနေစောင်းသည်နှင့် လူခြေတိတ်နေလေ့ရှိသည်။ ဤနေရာသည် သုဿန်တစပြင် ဖြစ်သည်။
သူ့လည်ပင်း၌ ပုတီးလုံးလေးများကို ချိတ်ဆွဲထားပြီး ပါးစပ်ကလည်း ဂါထာတပုဒ် ရွတ်နေသည်။ လက်ကတော့ တီးမြဲ ခေါက်မြဲ။ ခဏကြာတော့ နားငြီးမခံနိုင်တော့သော ၀ိညာဉ်တစ်ကောင် က ဆက်မတီးတော့ရန် လှမ်းအော်သည်။ တခြား ၀ိညာဉ် များကလဲ ၀ိုင်းထောက်ခံကြသည်။ ဟုတ်လဲ ဟုတ်သည်။ သူတို့ဘာသာ သူတို့ အေးအေးဆေးဆေး စကားစမြည်ပြောနေတာကို လာနှောက်ယှက်သည်ကိုး။ ထိုအခါ အဲ့ဒီလူက တီးနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး ၀ိညာဉ်များကို မျက်လုံးထောင့်ကပ် ကြည့်ကာ ဂရုမစိုက်လိုဟန်ပြုသည်။ ပြီးတော့ ခုနကလိုပင် တဖျောင်းဖျောင်းနှင့် ဆက်တီးနေလေသည်။ လက်သံကပြင်းလာပြီး ပို၍ ဆူညံလာသည်။ ၀ိညာဉ်များ သည်းမခံနိုင်တော့။ ဒီလူ ဘာလာလုပ်သလဲ..။ ၀ိညာဉ်တွေကိုများ မခိုးမခန့်။ လိပ်ပြာ နှုတ်လိုက်ရ.. ဘာညာနဲ့ အသံတွေ ထွက်လာကြသည်။ ၀ိညာဉ်တစ်ကောင်ကဆို လက်ဖမောင်းထခတ်ကာ ရိုက်မယ်တကဲကဲ ပြင်နေသေးသည်။ ကြာလျှင်မလွယ်တော့။
ထိုအချိန်ကျမှ သြဇာအာဏာရှိပုံပေါ်သော ၀ိညာဉ်အိုတစ်ကောင်က အားလုံးကို ငြိမ်ခိုင်းလိုက်ပြီး ထိုလူရှေ့မှာ သွားရပ်သည်။ နောက်.. မျက်ထောက်နီကြီးနှင့် စိုက်ကြည့်ကာ လာရာကို ပြန်ခိုင်းသည်။ မပြင်လျှင် တကယ် ဇီဝိန်ခြွေပစ်မည့်ပုံ။ ရုတ်တရက် ကိုင်ထားသော တုတ်ချောင်း ပြုတ်ကျသွားကာ ထိုလူ၏မျက်နှာသည် ချက်ချင်းပင် ကြောက်ရွံ့ထိပ်လန့်နေပုံသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ မျက်ရည်များပင် ကြလာလိုက်သေးသည်။ ၀ိညာဉ်များ ခဏတော့ ကြက်သေ သေသွားကြသည်။ ဘာဆက်လုပ်ရမည်မှန်းလဲ မသိ။ အသိအရင်ဝင်လာသော ၀ိညာဉ်အိုကြီးက ထိုလူ့မျက်နှာရှေ့တည့်တည့် လက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီး မေးသည်။ ဒါဆို ဘာလာလုပ်သလဲ ဖြေပေါ့။ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဓလေ့ အရ နှစ်ကူးပြီးတိုင်း ဒီလို ပုံးအဟောင်း၊ ခွက်အဟောင်း များတီးကာ မကျွတ်မလွတ်သော ၀ိညာဉ်များကို နှင် ရန်အတွက် လာသည်ဟု မကြားတကြားဖြေသည်။ ၀ိညာဉ်များ ခေါင်းရှုပ်ကုန်ကြသည်။ ဘယ်နှယ့် သုဿန်မှာများ ၀ိညာဉ်လာနှင်ရတယ်လို့။ သူတို့ ၀ိညာဉ်တသက်နှင့် တကိုယ် မကြုံဖူးသေးဘူးလေ။ တအံ့တသြ နှင့် ထိုလူအား အထူးအဆန်းသဖွယ် ငေးမောကြည့်နေမိကြသည်။
အားလုံးက သူ့ကို ၀ိုင်းငေးကြည့်နေကြတော့ ထိုလူက သူ့မျက်နှာအား ရှက်နေပုံပြုလိုက်ပြီး တိုးတိုးလေး ရယ်လိုက်သည်။ ၀ိညာဉ်တွေစိတ်ညစ်သွားသည်။ ငိုပြလိုက်၊ ရီပြလိုက်။ တတ်လဲ တတ်နိုင်သည်။ ခုချိန်ထိ ဘာတစ်ခုမှလဲ ထိထိခိုက်ခိုက်မလုပ်ရသေး။ ခြောက်လဲ ကြောက်မည့်ပုံမပေါ်။ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားလျှင် ကြာလျှင် ရူးနိုင်သည်။ ၀ိညာဉ်များ ရူးကုန်ကြသည်ဆိုလဲ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်း။ ခက်သည်။ ဒီလူ့ကြောင့်တော့ ၀ိညာဉ်တွေ နာမည် ပျက်နိုင်သည်။
ဆက်ပြီး ထိုလူက ၀ိညာဉ်အိုကြီး အနားကပ်ကာ ၀ိညာဉ်တို့ပညာ ဘယ်လောက်စွမ်းစွမ်း သူ့ကိုတော့ မယှဉ်နိုင်ကြောင်း။ သူ့ ဘုန်းနှင့် သူ့ကံမှာ အလွန်မြင့်ကြောင်း။ သူလည်ပင်း၌ ဆွဲထားသော ပုတီးကုန်းမှာ ဘုရားကပေးလိုက်သော အလွန်အစွမ်းထက်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း။ ၀ိညာဉ်ဆိုသည်မှာ လူကို ဘယ်သောအခါမှ မနိုင်ကြောင်း။ မျိုးစုံအောင် စကားနာ ထိုးလေသည်။ တတွတ်တွတ် ပြောနေသော ထိုလူကိုကြည့်ပြီး ၀ိညာဉ်အိုကြီး ခေါင်းတွေ နောက်နေသည်။ အကြံလဲ ကုန်ပြီ။ ဘယ်လို နှင်ရ မှန်းလဲမသိ။ စိတ်ရှိလက်ရှိ လုပ်လိုက်ရရင်လဲ မကောင်း။
ပြီးတော့ ထိုသူက ၀ိညာဉ်များအား ဤနေရာမှ မနေရန်၊ ပျော်ရာမှာ မနေပဲ တော်ရာမှာ နေရန် ပြောသေးသည်။ ၀ိညာဉ်များ၏ တော်ရာကား ဘယ်နေရာလဲ ၀ိညာဉ်များကိုယ်တိုင်ပင်မသိ။ ခုနေရာကကော ၀ိညာဉ်များ ပျော်သည့်နေရာလား မသေချာ။ ဘာဆို ဘာမှ မစဉ်းစားတတ်တော့။ သင်ရိုးတွေ အဘိဓမ္မာတွေ ကြားမှာ ၀ိညာဉ်များ ရူးသွပ်သွားကြသည်။ ဓလေ့တွေ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ ကြားမှာ အနေရခက်ကုန်ကြသည်။ စိတ်တွေ မခိုင်တော့။
ထိုသို့ ၀ိညာဉ်များ ကြောင်စီစီ ဖြစ်နေချိန်တွင် ထိုလူက သူ့ တုတ်ချောင်းကို ပြန်ကောက်ကာ သယ်လာသော ပုံးများခွက်များကို တီးလေတော့သည်။ အသံက စူးထွက်လာပြီး ၀ိညာဉ်များ၏ နား ဆီကို ဒုန်းစိုင်း ရောက်လာကြသည်။ ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်ကြတော့။ အသံက စူးသထက်စူးလာသည်။ ကယောင်ခြောက်ခြားနှင့် ၀ိညာဉ်များလဲ ထွက်ပြေးကုန်ကြသည်။ တိုက်သည့် ကောင်ကတိုက်။ လဲသည့် ကောင်ကလဲ။ ၀ိညာဉ်များအားလုံး ဒုက္ခရောက်နေကြသည်။ နောက်ဆုံး ထိုနေရာတွင် ၀ိညာဉ် တစ်ကောင်တစ်လေမှ မရှိကြတော့…။
သုဿန်သည် အသံများ တိတ်ဆိတ်ကာ ခြောက်ကပ်ကပ် ကြီးဖြစ်သွားခဲ့သည်။
၀ိညာဉ်များ နှင့် စိုစိုပြေပြေ မရှိတော့။
ထိုအခါကျမှ အောင်နိုင်သူ အပြုံးနှင့် ရှိနေသော ထိုလူက ခေါင်းတချက်မော့လိုက်ပြီး တဖျောင်းဖျောင်းနှင့် ဆက်တီးကာ သုဿန်မှ ထွက်သွားတော့သည်။
၀ိညာဉ်များလည်း တော်ရာကို ပြောင်းရွှေ့သွားသည် ထင်သည်။ နောင်အခါ သုဿန်ဟုခေါ်သော ထိုနေရာ၌ ၀ိညာဉ် တစ်ကောက်တစ်မြှီးမှပင် ပေါ်မလာတော့။
သို့သော် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တဖျောင်းဖျောင်း အသံကတော့ ကြားမြဲ။
‘အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ’… ။
ကောင်းသော အခြင်းအရာမှ လာခဲ့ပါစေ။
သိတံ ။ မျက်နှာကို ချိုသာအောင်ပြုတတ်သော မာယာ။
ဟာသ။ အသံတိုးတိုးလေးဖြင့် ရယ်ခြင်း။
လဇ္ဇ။ ရှက်သော အမူအရာ ဖြစ်ခြင်း။
မန္ဓ၀ါစာ။ မကြားတကြား ပြောခြင်း။
Posted by နရစိုး at 9:09 AM3comments:
နှင်းတစ်ပွင့်ထဲကို ပဲ လက်ခုပ်လေး နဲ့ ဆုပ်ထားမိတာပါ…….။
ကျောက်သင်ပုန်းမှာ အက်ကြောင်းရာတွေထင်အောင် လျှောက်ခြစ်ပစ်လိုက်တယ်။
ဘယ်တော့များမှ ပြန်တွေ့ကြရမှာလဲ…မနက်ဖြန်လား၊ နောင်တခေတ်မှလား။ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကော ဝေးနေရမှာလဲ… တစ်နှစ်လား ၊ ဆယ်နှစ်လား ။ ဒါမှမဟုတ် တဘ၀လုံးလား..။ အရာရာဟာေ၀၀ါးလို့ ဘာတစ်ခုမှ မသေချာခဲ့ဘူးကွယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာ … ကျောင်းသူလေးက ကျောင်းသားလေးကို မေးတယ်။ ‘နင်တကယ် ထွက်သွားတော့မှာပေါ့’ ..။ ကျောင်းသားလေးက ဘာမှမဖြေဘူး။ သူ့ခေါင်းကိုသာ ခပ်လေးလေး ညှိမ့်ပြတယ်။ သစ်ရွက်တွေကလည်း လိုက်ညှိမ့်တယ်။ ကျောင်းခန်းထဲက စာသင်ခုံတွေကလည်း လိုက်ညှိမ့်တယ်။ နောက်ဆုံး ကျောင်းဝန်းထဲမှာ အလေ့ကျပေါက်နေတဲ့ မြက်ပင်လေးတွေက အစပေါ့ … ခေါင်းလိုက်ညှိမ့်ကြတယ်။
အလင်းတွေကို ခူးဆွတ်ပေးဖို့ မတတ်နိုင်တဲ့အခါ
ငါ့ နတ်သမီးလေးရယ် … ခွင့်လွှတ်ပါ။
ကျောင်းသူလေးရဲ့ ချာကနဲ လှည့်အထွက်မှာ နတ်ဆိုးရဲ့ ရယ်သံဟာ ကျောင်းသားလေးရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်ကို စီးကျလာတယ်။ ဘယ်တိုင်းဘယ်ပြည်က ငို သံ လဲ ကွယ်။ တဆိတ်ဆူးနစ်ဝင် လွယ်လွန်းလှတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း မြက်ဖိနပ်စီးခဲ့ရတာကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား။ လမ်းမှာ ဆူးပေါလွန်းတာကိုပဲ .. တောက် . ခေါက်ရမလား။ ဘ၀အကြောင်း စာစီစာကုံးမှာ ကြက်ခြေခတ်တွေချည်းပဲ ချရေးချင်တယ်။
တကယ်လို့ မြစ်တွေသာ ပြောင်းပြန်စီးဆင်းခဲ့ရင် မေခနဲ့ မလိခ တို့အကြောင်းဟာ ရင်ကွဲစရာတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ နင်နဲ့ ငါမှာ ရော အဲ့ဒီကျိန်စာ ပါလာသလား။ ခုလဲ တစ်နယ်ဆီ ခြား .. ငါတို့ ဝေးနေဆဲပဲလေ။ နင်မသိတဲ့ ဒီအရပ်ဟာ အော်သံတွေ ဆူညံနေတယ်။ ဓါးချင်းခတ်သံတွေဟာလဲ ကြက်သီးထစရာကောင်းလောက်အောင် လွင့်မျောလို့။ သွေးစာနေတဲ့ မြေပြင်မှာ ဟော့ဒီကောင် တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။ ထိပ်ထားရေ… ဒီဝေဒနာဟာ သံသရာချီအောင်ကြာရဲ့။
ငါ့ ဦးဆံမြေ့ ကို
တိုက်ပွဲမှာ ငါ သူရဲကောင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထိပ်ထားရယ်. နင်ပေးဖို့ ရည်းစူးထားတဲ့ ပန်းတပွင့်ကိုတော့ ငါမရခဲ့ဘူး။ ငါတို့တွေ ဝေးနေကြတယ်လေ။ ချစ်သူတို့ ထားတဲ့သစ္စာဟာ မီးခတ်တဲ့ကျောက်မှာ ရှိတယ်။ ၀တ်ရည်ထဲမှာ ပျော်ဝင်တယ်။ မြေမှုန်တွေနဲ့ ဖန်ဆင်းပြီး ဆောင်းရာသီ ရနံ့သင်းတယ်။…. …. …. ။ အင်းဟုတ်ပြီ ..။ ဒါလောက်လေးနဲ့ပဲ ငါတို့ကျေနပ်ကြရအောင်။ ပြီးတော့ နင့် တိုင်းပြည်ကို ငါ ပြန်ဝင်တဲ့ အခါ စကားဝှက်ပြောဖို့လိုတယ် မှလား။ အဲ့ဒါဟာ သစ္စာတွေအကြောင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ။ ခုကော ငါ့ကို နင်.. ၀တ်ကျေတန်းကျေ လွမ်းနေသေးလား…….။ ချိုကြည် လွင်မြ နေဆဲ.. နင့် မျက်ဝန်းလေး…….. အဲ့ဒါဟာ ..ငါ့ရင်ထဲ ၀င်ဖို့ စကားဝှက် ဖြစ်တယ်။
အလွမ်းပန်းခွေချခံရတဲ့ အာဇာနည်ဟာ မျက်ရည်ကျဘူးတယ်ကွဲ့…။
ကျွန်လို တစ်လှည့်၊ သူရဲကောင်းလို တစ်လှည့်
သွား မယ် ကွယ်…. ။
Posted by နရစိုး at 3:57 AM5comments:
Posted by နရစိုး at 8:38 AM3comments:
မနက်ခင်းက အားလုံးထက် အရင်အိပ်ယာထပြီး လောကကို လင်းပြပေးနေသည်။
ဟောဟိုမှာ နေခြည်တွေကို ရိုက်ခွဲ ဖောက်ထွက် … မြို့ကလေး ကိုတွေ့နေရပြီ။
သူ့ခြံစည်းရိုးမှာ သက်တံ့တွေကို ချိတ်ထားတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့
မြို့ကလေးက သူ့မြေပြင်မှာ ပွင့်တဲ့ပန်းနဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုနေတယ်။ ခဏကြာမှ အမျှဝေသံနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ သူ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ခေါင်မိုးငယ်ငယ်အိမ်လေးတွေကို တစ်ချက် ငုံ့ကြည့်ရင်း ခါတိုင်းနေ့တွေလို သီချင်းတွေဆို နေတယ်။ သံစဉ်တွေ ခင်းထားတဲ့ မြို့ကလေးပေါ့။
တစ်ရက်တော့ မြို့ကလေးထံသို့ လူစိမ်းတစ်စုရောက်ရှိလာကြသည်။ သာယာလှသော ထိုမြို့ကလေးအား လူစိမ်းများက ကြိုက်နှစ်သက်ကာ အခြေချနေထိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။ မြို့ကလေးကတော့ ကြည်ဖြူစွာပဲ လက်ခံလိုက်သည်။ နောက်တော့ ထိုလူစိမ်းအုပ်စုထဲ၌ ခေါင်းဆောင်မည်သော လူတစ်ယောက်က ဤမြို့ကလေး၏ အရှင်သခင်ဟု သူ့ကိုယ်သူ ခန့်အပ်ကာ နောက်ထပ်ရောက်လာကြသည့် တခြားသော လူများအား ဤမြို့ကလေး၌ နေထိုင်ချင်လျှင် သူ့အမိန့် သူ့အာဏာ သူ့လက်အောက် မှာသာနေရမည်ဟူသော ခပ်ကြောင်ကြောင် ဥပဒေ တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ထား၏။ မြို့ကလေးက ဒါကို သိပ်တော့ သဘောမကျ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှတော့ မပြောဖြစ်။ ဘယ်သူတစ်ယောက်ကမှ လဲ သူ့ကိုမလွန်ဆန်ချင်ကြသဖြင့် ထိုအတိုင်းပင်
ပြဿနာက အဲ့ဒီမှာ စ သည်။
ထိုခေါင်းဆောင်ဆိုသူက လူ့သဘာဝ လောဘဇော အတောမသတ်နိုင်ပဲ မြို့ကလေးကို သူတစ်ယောက်တည်းပိုင်အောင်၊ ဒီထက်ပို၍ သူလိုသလို အသုံးချနိုင်အောင် ဥပဒေ ထပ်ထုတ်သည်။ ထိုအခါကျ မြို့ကလေးက သည်းမခံနိုင်တော့။ မြို့နေတခြားလူများကလည်း ဆူညံထကြွကုန်ကြသည်။
သို့သော် ထိုသူ အား မတွန်းလှန်နိုင်ကြ။ အင်အားတောင့်သော ထိုလူစိမ်းအုပ်စု ကလည်း ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင် ရက်စက်ကြသည်။ မြို့ကလေးကလည်း အတိုက်အခံ ငြင်းသည်။ နောက်ဆုံး ထိုခေါင်းဆောင်ဆိုသူက စီရင်ချက်တစ်ခုချမှတ်လိုက်သည်။
မြို့ကလေးကို ‘ထောင်’ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပစ်လိုက်သည်။
ဖုန်မှုန့်သဲမှုန့်တွေကြားမှာ မြို့ကလေး မွန်းကြပ်နေသည်။
ဟီရိ နှင့် သြတပ္ပ မည်သော လောကပါလ တရားနှစ်ပါး ပျက်သုန်းသွားကြသည်။
နေ့တွင် မီးထတောက် လောက် အောင် နေပူပြင်းပြီး ညတွင် မိုးခါးရေတို့ရွာကျသည်။ အိပ်မက်များ၌ အော်သံတွေဆူညံနေပြီး အရင်ကလို အရောင်မစုံတော့ပေ။ ယခင်က လိပ်ပြာများ ပျံဝဲ သော ပန်းခင်းသည် ယခုအခါ သုဿန်တစပြင် ဖြစ်လာသည်။ မြို့ကလေးမှာ မွန်းကြပ်နေဆဲ။
အမိုက်မှောင်ဖုံး၍ ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော်သည်လည်း အရင်ကလို ရေ၌မပျော်ဝင်တော့။ ပြောင်းလဲကုန်ကြပြီ။ မြေလွှာများ တွန့်ခေါက်ကုန်ပြီး အနိမ့်အမြင့်များ ပေါများလာသည်။ အရင်ကလို မညီညာတော့။ မတ်စောက်သော တောင်များဖြစ်ထွန်းနေပြီး နက်ရှိုင်းသော ချောက်များရှိလာကြသည်။ အရင်ကလို မညီညာတော့။ လေပြေသည်ပင် မုန်တိုင်းပမာ ပြင်းလွန်းလှ၏။ ထို့အတူ မိစ္ဆာဘုံသားများ၏ ကိုယ်ရနံ့၊ ရင်ဘတ်စည်တီးအော်သံတို့သည် လေ၌ မျောပါလျှက် အရင်ကလို မသင်းပျံ့ မသာယာတော့ချေ။ မြို့ကလေးမှာ မွန်းကြပ်နေဆဲ။
စီးတော်မြင်းပေါ်တွင် ဓါးကိုမြှောက်ကိုင်ထားသော သူရဲကောင်းတို့၏ ပုံနိမိတ်သည် မြို့ကလေး၏ ကောင်းကင်၌ မလင်းမြတော့။ မြို့ကလေး၏ ကံကြမ္မာသည် ဘီးလူးနက္ခတ် ဖြစ်လာသည်။ မြို့ကလေး၏ အရိပ်သည်လည်း နေ့အခါ၌ပင် မပေါ်တော့။
တစ်ချို့လူတွေက မြို့ကလေးကို စွန့်ခွာသွားကြသည်။ တစ်ချို့လူတွေကတော့ မြို့ကလေးကို အသုံးချဆဲ။ တစ်ချို့လူတွေက ဖာသိဖာသာ။
ပြောဖို့မေ့ကျန်ခဲ့သည်မှာ မြို့ကလေး၏ ဇာတာ၌ အမှားလက္ခဏာ ပါလေသည်။
ဖုန်မှုန့်သဲမှုန့်တွေကြား မြို့ကလေးမှာတော့ မွန်းကြပ်နေဆဲ ပင်………။
-ကျွေးတာစား၊ ပေးတာယူ၊ ခိုင်းတာလုပ်၊ ပြန်မပြောနဲ့
(တခါတလေ ကြိမ်ဒဏ်၊ တခါတလေ အသတ်ပါခံရ)
Posted by နရစိုး at 10:35 AM5comments:
မနေ့တစ်နေ့က အချစ်ဆုံးဟုပြောမိသော ကောင်မလေးသည် ဟိုးအရင်တုန်းက အချစ်ဆုံးဟု ထင်ခဲ့သော ကောင်မလေး မဟုတ်ကြောင်းကို အချစ်ဆုံးပါဟု ယခုအခါ ပြောမည့် ကောင်မလေးက နောင်အခါ၌ သူမသည် အချစ်ဆုံး ဟုတ်တော့မည်မှာ မသေချာကြောင်း သိရှိသွားသောအခါ ကျနော့် ပါးပြင် သည် ဖြောင်းခနဲ အသံမည်သွား၏။ ထိုနေ့သည် မိုးရွာသောနေ့ ဖြစ်သည်။ လွမ်းတတ် ဆွေးတတ် သူများသည် သစ်ရွက်ကလေး ကြွေသည်ကိုပင် ကြည့်ကာ မျက်ရည်ကျတတ်လေ့ ရှိသည်ဟု ပြောကြသော်လည်း လွမ်းဆွေးတတ်သော ကျနော့် အရှေ့၌ သစ်တော တစ်ခုလုံး ပြိုလဲသွားသည့် အခါ သစ်ရွက်တစ်ရွက် စာတိုင်းအတွက် အချိုးကျလိုက်၍ ငိုရမည်ကို စိုးထိပ်လျှက် မျက်ရည်များကို နှမြောသောကြောင့် ဒီအတိုင်းပင် ကျနော် လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်။ ပါးပြင်၌ အနည်းငယ် စိုစွတ် နေသည်မှာ မိုးရွာနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
စာနာထောက်ထားတတ်လျှင် ဤနေရာ၌ ချို့တဲ့သူများအား သဒ္ဒါတရားနည်းများမဆို လှူဒါန်းကြပါရန် ဟူသော ဆိုင်းဘုတ်အရ ကျနော်သည် မေတ္တာချို့တဲ့သူ ဖြစ်ပြီး အချစ်ချိုချို များအား နည်းများမဆို ပေးသနားကြမည့် စာနာထောက်ထားတတ်သူများ မရှိဖြစ်နေရာ ထိုကဲ့သို့သော ဆိုင်းဘုတ်မျိုးကို မည်သည့် နေရာတွင် ချိတ်၍ မည်သို့မည်ပုံရေးကာ အချစ်တောင်းစားသူလုပ်ရလျှင် ကောင်းမည်လားဟု တွေးမိသော်လည်း သူငယ်ချင်းတစ်ချို့က လက်မခံ၊ ဘ၀ပေး အခြေအနေကလည်း ထင်သလောက် မဆိုးရွားသေးသဖြင့် တခြားပိုကောင်းသော အကြံအစီကို သုံးကာ အချစ်တခုကို ရအောင်ရှာမည်ဟု ဆုံးဖြတ်နေခိုက် ထိုကောင်မလေးကို တွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေ့သည် မိုးရွာသောနေ့ ဖြစ်သည်။
သူမရော ကျနော်ပါ မေ့လျော့နေသည်မှာ ဤတွေ့ဆုံခြင်းသည် နောင်အခါ လမ်းခွဲရဖို့အတွက် နိဒါန်းပျိုးခြင်း တစ်ခုသာ ဟူသော အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ပျက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ရသည်။ ထပ်ဖြစ် ဖို့အတွက် ပျက်ပေးရသည်။ ကမ္ဘာစောင့်နတ်တွေရဲ့ ကျိန်စာပင်လား မသိ။
သူမကိုတွေ့တော့ မိုးရွာနေချိန်ဖြစ်ပြီး မိုးစက်ပေါက်များ လာစင်မည်ကို စိုးသဖြင့် အ၀ါရောင်ထီး တစ်ချောင်းနှင့် သူမကိုယ်သူမ မိုးကာ လူတစ်ယောက်မှ မရှိသော ကားဂိတ်တွင် သူမတစ်ယောက်တည်း ကျုံ့ကျုံ့ကလေးရပ်နေရရှာသော စိတ်ပျက်အားငယ်သည့် ခံစားချက်သည် သူမ မျက်နှာပေါ် နဂိုရှိနေရာမှ ကျနော့်ကို မြင်သော အခါ ခပ်တည်တည် အမူအရာသို့ ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားပြီး ကျောပေးရပ်လိုက်သည့် အခိုက်အတန့်လေး၌ သူမကို ကျနော်ချစ်သွားခဲ့သည်။
အချစ်ဆိုသည်မှာ စားကောင်းသော သစ်သီးပါလော။ ဓာတ်ကြီးလေးပါးနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ထိုလူရုပ်ကောင်ကြီး၏ အချစ်ဆိုသော အရာသည် ဘယ်ဓာတ်ကပွင့်သော ခံစားမှုဖြစ်မည်နည်း။ မိုးရေအနည်းငယ်စိုနေသော သူမခြေဖျားလေးများမှ အချစ်ဆိုသောအရာသည် စတင်ခဲ့ပြီလား။ ဒါမှမဟုတ် အချစ်သည် ပုံပြင်ထဲမှ ရုပ်ဆိုးဆိုးစုန်းမတစ်ကောင်၏ ကျိန်စာတိုက်ထားသော ပန်းပွင့်၌ တည်လေ သလော။ ထိုစားမေးပွဲ၌ ကျနော်မဖြေနိုင်။ ထို့အတူ သူမမေးသော မေးခွန်းများကိုလည်း မဖြေနိုင်။ ကြက်ခြေခတ်များနှင့် အဖြေလွှာစာရွက်သည် စားကောင်းသော သစ်သီးမဟုတ်။
ထိုသို့ဖြင့် ခနော်ခနဲ့နိုင်သော သဘာဝတရား၏ တွေ့ဆုံမှုသည် သူမနှင့်ကျနော့်ကို ဝေးစေခဲ့သည်။ ထိုနေ့သည် မိုးရွာသောနေ့ ဖြစ်သည်။
Posted by နရစိုး at 7:07 AM No comments:
ခေါင်းက ကောင်းကင်နဲ့ မလွတ်
မိုးက ငါ့ကို ရွာချတယ်။
လေလား မိုးလား ..။
သူတို့ က ရှို့တယ်.. ငါက ငြိမ်းတယ်
လူဆိုတာ စနစ်တကျ ပျက်စီး တတ်ဖို့ လိုတယ်မှလား
‘သူမ’ ကို အိပ်မက်မက် ပစ်မယ်..။
Posted by နရစိုး at 7:50 AM No comments:
နွေဦးကိုရောက်တော့ ဘုရားသခင်က ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးတယ်။ သစ်ရွက်ကလေး ကြွေလာသလို ဘုရားသခင် လက်က လွတ်ကျသွားတဲ့ အဲ့ကဗျာလေးဟာ ကမ္ဘာမြေမှာ ပန်းရောင်စုံ ပွင့်တဲ့ တိုင်းပြည် လာဖြစ်ရဲ့..။ အဲ့ဒီ တိုင်းပြည်မှာ ခေတ်ကိုပန်ထားတဲ့ ကမ္ဘာမြေရဲ့ ပန်းတွေ ပွင့်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် လေပြည်တစ်ဝှေ့က အစ မွှေးမြ ဖြူစင်လွန်းအားကြီး နေတာပေါ့။
နတ်တို့ရွာက အလင်းနဲ့ အုပ်မိုးလို့ ထား .. အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကို ‘ကျောင်းတော်’ လို့ ခေါ်တယ်။
စံပယ်တွေ ခြံရံပြီး နက္ခတ်တွေ လှလှပပ ပွင့်တဲ့ နေ့ပေါ့… အဲ့ဒီနေ့မှာ ကျောင်းတော်ကို စဖွင့်တယ်။
ပန်းတွေ ပန်းတွေ…. အထွေးလိုက် အဆုပ်လိုက် ပွင့်ဝေ…
ကမ္ဘာဦးရဲ့ သက်တန့်ရောင် ဟာ အဖြူနဲ့ အစိမ်းက စတယ်။ မယုံတဲ့ လူ လဲသေလိုက်။
ဒို ရေ မီ ဖါ ဆို လာ တီ ဒို … ပန်းပွင့်တွေရဲ့ ရစ်သမ်ဟာ သရဏဂုံ သုံးပါးဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာမကြေ မြန်မာပြေ ဖြစ်တယ်။ မင်္ဂလာပါ ဆရာမ ဖြစ်တယ်။ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ ဖြစ်တယ်။ စာအံသံတွေ နဲ့ ….. အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကို ‘ကျောင်းတော်’ လို့ ခေါ်တယ်။
သောက်ရေအိုးစင်၊ မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ အမျှဝေသံ ပေါတဲ့ အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာ မိခင်ဆန်ဆန် အပြုံးတွေရှိတယ်။ မိုးရာသီနဲ့ အောင်စာရင်းရှိတယ်။ စာသင်ခုံတွေ ရှိတယ်။ ပိတောက်ပင် ရှိတယ်။ မုန့်ဈေးတန်း ရှိတယ်။ ဘုရားစင် ရှိတယ်။ ခေါင်းလောင်းသံ ရှိတယ်။ သဲမြေပြင်ကို ရေဖျန်းထားတဲ့ ရနံ့တွေ ရှိတယ်။ စာကြည့်တိုက် ရှိတယ်။ မာလကာသီး ရှိတယ်။ လွယ်အိတ်တွေ ရှိတယ်။ ဘုရင့်နောင် အသင်း ရှိတယ်။ ညှပ်ဖိနပ်သံတွေ ရှိတယ်။ ကမ္ဘာကစောင့်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ ရှိတယ်။ သုညတွေ ရှိတယ်။ ကျောက်သင်ပုန်းကို မြေဖြူက လာထောက်တဲ့ အသံတွေ ရှိတယ်။ စိန်ပြေးလိုက်တမ်း ရှိတယ်။ စာအုပ်နဲ့ ခဲတံ ကိုင်ထားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ တိုင်းပြည်……….
အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကို ‘ကျောင်းတော်’ လို့ ခေါ်တယ်။
ပြီးတော့ .. ပန်းပွင့်တွေ…
သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဆွဲပွင့်တတ်ဖို့ အဲ့ဒီတို်င်းပြည်မှာ သင်ခန်းစာ အပြည့်ရှိတယ်။
ဂြိုလ်ကိုးလုံးအကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မီးသီး အကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်း၊ ကိန်းဂဏန်းများ အကြောင်း၊ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ရေ အကြောင်း သင်တယ်။ နောက်ပြီး အမြဲစိမ်းတော အကြောင်း၊ မူဆိုလိုနီ အကြောင်း၊ အရှင်မဟာ ရဋ္ဌသာရ ၏ ကဗျာများ၊ ဦပုည၏ ပြဇာတ်၊ မပုကြွယ်နှင့် ခရုငယ်၊ မျက်မမြင် ကောင်လေး အကြောင်း၊ ဖားအကြောင်း၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြောင်း၊ အေသင်မြို့မှ အပြေးသမား အကြောင်း၊ ဘုရင့်နောင် အကြောင်း… ။ …………။ စုံလို့ ပါပဲ။ ဘ၀အကြောင်း သင်ရိုး တွေနဲ့
‘ကျောင်းတော်’ ဟာ သူသိပ်ချစ်တဲ့ ပန်းပွင့်တွေကို ရင်နဲ့ အမျှထွေးပွေ့ ခဏခဏ ငုံ့နမ်းလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ပန်းတစ်ပွင့်ကို မှ သူ့လက်နဲ့ ဖမ်းဆုပ် မထားခဲ့ဘူးလေ။
ဒီလိုနဲ့ နှင်းစက်တွေ တစ်ဖွဲဖွဲ ရွာကျ .. ခိုက်နေအောင် ချမ်းလာတဲ့ အခါ ..
သူ့ကိုယ်ပေါ်က နှင်းစက်တွေကို ‘ကျောင်းတော်’ က ခါချလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ဟာ ကျောင်းပိတ်ချိန် ဖြစ်တယ်။
Posted by နရစိုး at 6:46 AM3comments:
၀ါဒိက္ခရာ (ခေါ်) ၀ီစကီ နှင့် ဇာဏိယာ (ခေါ်) ရမ် တို့ကို အလွန့်အကြွံ သောက်သုံးပါက အရက်နာကျသော ဒဏ်ကို ခံစားရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သုရာမေရယကံ (ခေါ်) အရက် သေစာ မူးယစ်သောက်စား ကျူးလွန်သောကံကို ဖောက်ပြန်နေကျဖြစ်သော မဇ္ဇပ (ခေါ်) အရက်သမားများက ထိုအရက်နာကျသော ဒဏ်ကို မမှုတော့ပေ။ အရက်သောက်သော သူများထဲတွင် ပုဏ္ဏသိရောမတ္တက (ခေါ်) ထိပ်ပြောင်၍ ဥဂ္ဂနာသိက (ခေါ်) နှာခေါင်းကြီးသော ၀ုဒ္ဓါဝိဟာဝိတ (ခေါ်) လူပျိုကြီးများလဲ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဗာလဘာဝတောဒါသ (ခေါ်) ငယ်ချစ် ကြောင့် ပေမဿု (ခေါ်) မျက်ရည်များ ကျကာ အသည်းကွဲဒဏ်ကို မခံနိုင်သဖြင့် သုရာ (ခေါ်) အရက်သေစာ ကို သောက်လေ့ရှိသည် ဟုဆို၏။ သို့သော် မေ့ကား မမေ့နိုင်ချေ။ မက္ခိတာ (ခေါ်) ယင်ကောင်သည် ဂုတ္တဓရ (ခေါ်) စုံထောက်တို့၏ ကိုင်စွဲနေကျ ဖြစ်သော ပရိက္ကာမ (ခေါ်) ခြောက်လုံးပြူး ဖြင့် ပစ်လျှင် ပင် မထိ။ ထိုခြောက်လုံးပြူးသည် အရက်မသောက်။ ယင်ကောင်သည်လည်း မူးယစ် မနေ။ အန္နပါနေသု (ခေါ်) ထမင်းအဖျော်ကောင်း စားသောက်သော အခါ၌ ပိယံ (ခေါ်) ချစ်သောသူကို ဣစ္ဆန္တိ (ခေါ်) အလိုရှိကြကုန်၏။ မူးယစ် နေချိန်တွင် ပြောသည့် လွမ်းတယ် ဟူသော စကားနှင့် ဘာကွာသနည်း။ ထိုခဏ၌ ကာမိနီ (ခေါ်) ချစ်ဖွယ်ကောင်းသော မိန်းကလေး ကို သတိတရ အလိုရှိနေပြီလား။ လောက၌ ဥာဏ်နှင့်ယှဉ်၍ လွမ်းဆွေးခြင်းသည် အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ မူးယစ်နေချိန်၌ ဆင်ခြင် ဥာဏ် နည်းပါး၏။ ထို့ကြောင့် အရက်တစ်ခွက်သည် အနည်းဆုံး လွမ်းသည့်ဒဏ်ကိုတော့ အဆိုးဆုံး မဖြစ်စေနိုင်ပေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမဖြစ်နဲ့ဟု ရှေးလူကြီးများက ဆုံးမဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာမှ မဖြစ်။ ဘာမှ မရှိ။ ထိုအခါ ကမ္ဘာကြီးသည် တစ်ကောင်တည်း ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွား၏။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေသော ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်သူက အရက်သွားတိုက်လိုက်သည်မသိ။ လူမှန်းသူမှန်း မသိ မူးနေတာ ခုချိန်ထိပင်။ ဆက်၍ဆက်၍ သူ့အပေါင်းအဖော်များ ဖြစ်သော ဂြိုလ်ကိုးလုံး၊ ကြယ်များ၊ လများ ကလည်း အားကျပြီး သုရာ (ခေါ်) အရက်ကို လိုက်သောက်ကုန်ကြ၏။ အားလုံးမူးကုန်ကာ ချာချာလည် သွားကြသည်။ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိသော လူများက ရူပဗေဒ ပညာရှင် ဟု သူတို့ကိုယ်သူတို့ နာမ်စားသုံးကာ ထိုအခြင်းအရာများ လည်နေရခြင်း အကြောင်းကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ကြကုန်၏။ ရှာမတွေ့ သောအခါ စိတ်ညစ်ညစ် နှင့် သုရာ (ခေါ်) အရက် ကို သောက်ကြပြန်လေသည်။ ထိုမှတဆင့် သောက်စား မူးယစ်ခဲ့ကြရာ ကမ္ဘာမြေကြီး ၏ အဆင်တန်ဆာ ဖြစ်သော လူသားအားလုံးတို့သည် သုရာ (ခေါ်) အရက်ကို ကြိုက်မှန်းမသိ ကြိုက်လာကြတော့သည်။ တစ်ချို့ အရက်သမား များသည် အရက်သောက်ပြီး ပါဏာတိပါတာကံ (ခေါ်) သူတပါးအသက် သတ်ခြင်း ကံကို ကျူးလွန်ကြ၏။ တစ်ချို့ကလည်း ကာမေသုကံ (ခေါ်) သူတပါး သားမယား အားပြစ်မှား ခြင်းကံကို ကျူးလွန်ကြ၏။ တစ်ချို့ကလည်း အကုန်လုံး ကျူးလွန်ကြ၏။ ကြာသပတေးနေ့ဖွားဖြစ်သော ကဿပ ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်၌ ဗျာဒိတ်တော်ရခဲ့ သော .သောကြာနေ့ဖွား ဂေါတမ ဘုရားရှင်သည် ဘုရားအဖြစ်သို့ မရောက်ရှိခင် ကာလ သုရာ (ခေါ်) အရက် ကို လယ်လုပ်သား ဘ၀၌ သောက်စားခဲ့ဖူးသော်လည်း မုသာဝါဒ ကံ (ခေါ်) လိမ်ညာ ပြောဆို ခြင်းကံကို တစ်ခါမျှပင် ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု တရားစာအုပ်များ၌ တွေ့ရသည်။ သေချာတာက တော့ ကဗျာဆရာများ အရက်သောက်လျှင် အရက်သမားဟု မခေါ်။ ယမကာ လုလင်ဟုသာ ခေါ်သည်။ ဤသည်မှာ အမ္မတသာဂရဘေသဇ္ဇ ကျမ်းကြီးအလို အရသာ ဖြစ်တော့သည်။
Posted by နရစိုး at 5:31 AM No comments:
လှိုင်းတွေက သူ့ကိုယ်သူ ပင်လယ်ကနေ ဆွဲမပြီး လှေကလေးကို ခပ်ပြင်ပြင်း ရိုက်ချလိုက်တယ်။ဆတ်ခနဲ ကောက်ထလိုက်တာက လွဲရင်..မမှုတော့ပါဘူးလေ။ဒီလိုနဲ့ အိပ်ယာဝင်၊ အိပ်ယာထ လာခဲ့ရတာ အတော်ကြာပြီကိုး။ သစ်နေကြ ပင်လယ်ရေနဲ့ပဲ လန်းဆန်းသွားအောင် လုပ်လိုက်တယ်။ အိတ်ခွံထဲ မှာ ပေါင်မုန့် နှစ်ချပ်က နွမ်းချိနေပြီ။ ဒါကိုပဲ သူက မြိန်ရေရှက်ရေ စားပစ်လိုက်တယ်။
ဘယ်တော့များမှ ကမ်းကို မြင်ရမှာလဲ….. ခရီးသွား သင်္ဘောတစ်စီးစီးလောက်နဲ့ တွေ့ရင်ကောင်းမယ်။
မေးခွန်းတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ နဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ကိုယ်သူ မီးမြှိက်နေတယ်။ ပြီးမှ.. ပူပြင်းတဲ့ နေရောင်ကို မကျေနပ်သလို ကြည့်ပြီး တောက်. တစ်ချက်ခေါက်လိုက်တယ်။ ပင်လယ်ကတော့ မုဆိုးဆန်ဆန် ပြုံးနေလေရဲ့။
သူတို့ ကုန်တင်သင်္ဘောငယ်လေး ပင်လယ်ထဲ စ၀င်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ မုန်တိုင်းမိပြီး မြုပ်လေသည်။
အခြားအဖော်များကတော့ မသိ။သူကတော့ စားနပ်ရိက္ခာ တစ်သတ္တာနှင့် လှေငယ်တစ်စင်းကို သူ့ သင်္ဘော ကပ္ပတိန်ဆီမှ လုယူကာ အသက်လု ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ခုချိန်ထိ ဘယ်သောင်ဘယ်ကမ်း ကိုမှ ရေးရေးမျှပင် မမြင်ရသေး။ ‘အရာဝတ္ထုတိုင်း၌ အလျား၊အနံ၊အမြင့် နှင့် အချိန် ရှိသည်’ ဟု စာအုပ်တစ်အုပ်၌ သူဖတ်ဖူး၏။ ထိုသို့ ဆိုလျှင် ယခု သူရောက်ရှိနေသော ပင်လယ်၏ အလျားတစ်ခုနှင့် ထိနေသော ကမ်းစပ်တစ်ခုသို့ ရောက်ရန် အချိန်မည်မျှ ကြာမည်နည်း။သူ မသိ။ သူသည် စတီဗင်ဟော့ကင်း မဟုတ်။ အိုင်းစတိုင်း မဟုတ်။ ရလေတစ်ဗတီ သီအိုရီကို သူမသိ။ သင်္ချာ သဘောတရား ကို သူနားမလည်။ ထို့ကြောင့် ဤပင်လယ်ထဲ ၌ တ၀ဲလည်လည် ဖြစ်နေရသည်။
စတီဗင်ဟော့ကင်း ကိုယ်တိုင်ဆိုလျှင်လဲ လွတ်နိုင်မည်မထင်။ သူက လှေလှော်ဖို့ရန် ပင် မတတ်နိုင်သည်ကိုး။ အိုင်းစတိုင်းကတော့ မပြောတတ်။ သူလှေလှော်တတ်ကြောင်း သမိုင်းထဲ၌ ပါမလာ။ လောက၌ တစ်ချို့ချို့သော ကိစ္စများသည် သီအိုရီဖြင့် အောင်နိုင်ချင်၍ မရ။ ထာဝရဘုရားသခင် (ရှိခဲ့သည်ဆိုလျှင်) ကိုယ်တိုင်လဲ ဤလူ့ကမ္ဘာကြီးအား သီအိုရီ များ ဖော်မျူလာ များနှင့် ဖန်ဆင်းခဲ့သည် ဟု မကြားဖူးပါ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ.. လောလောဆယ်တော့ ဒီပင်လယ်ပြင်ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်မှ ဖြစ်မည်။ ဒါမှ သူအသက်ဆက်ရှင်နိုင်မည်။ ရေနှင့် စားနပ်ရိက္ခာကလည်းကုန်ခန်းလုပြီ။
မယ်မယ်ရရ လုပ်စရာမရှိတော့လည်း အတွေးများက ဟိုတစ်စဒီတစ်စ သူ့ခေါင်းထဲ ၀င်လာသည်။ သူသာ မဟာဇနက အလောင်းတော်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ရေထဲ ဒိုင်ပင်ထိုးဝင်ကာ ဦးတည်ရာ တစ်နေရာသို့ မနားတမ်း ရောက်အောင် ကူးမိမည်လော။ မသေချာ။ သူ့ထံ ၌ ဇွဲမရှိ။ တစ်ကိုယ်လုံးသုတ်လိမ်းရန် နှင့် အစာခံအောင် စားသွားရန် ထောပတ် မရှိ။ လက်ပန်းကျနေချိန်တွင်ပင် လာကယ်ရန် မေခလာ နတ်သမီးမရှိ။ ထို့ကြောင့် ရှိနေသည့် သူ့လှေကလေးဖြင့်ပင် အရပ်မျက်နှာ တစ်ခုသို့ (ကမ်းတွေ့လို တွေ့ငြား) လှော်ခတ် ခဲ့ရသည်။ နေရောင်က ခုချိန်ထိ ပူပြင်းတောက်လောင် ကောင်းတုန်းရယ်။ မိုးမယ့်ကာမယ့် အရာ မရှိတော့ ပင်လယ်ပြင်ကလည်း တံလျှက်ရောင် တဖြန်းဖြန်းနဲ့ ကျိန်းစပ်နေသည်။ သူလှေကလေးနှင့် သူ လည်း အတော်ပင် စုတ်ပြတ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ အခုလို ကျတော့လည်း ဒီ ကုန်တင်သင်္ဘောနဲ့ အစတည်းက မလိုက်ခဲ့ရင် ကောင်းသားဟု သူ နောင်တရနေမိသည်။ ကိုယ်ပိုင်မြေ တစ်ကွက်ဝယ်ရန် ပိုက်ဆံလို သောကြောင့် သူ ဒီသင်္ဘောနှင့် လိုက်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ခုတော့ သူပိုင်သည့် (ပိုင်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည့်) မြေက လှေငယ်လေး တစ်စင်း စာရယ်။ ကမ်းမတွေ့လို့ ပင်လယ်ထဲ၌ပင် သူသေသွားလျှင်လည်း သူ့ကို မြှပ်စရာ မြေနေရာ တစ်ပေပတ်လည် မျှပင်မလို။ ကဲ….. လောကရယ် တစ်ကိုယ်လုံး လောင်ကျွမ်း တောက်လောင် ပြနေခဲ့ရင်တောင်မှ ရလဒ်က ပြာမှုန်တွေတဲ့လား…။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဘ၀ကို အဲ့ဒီကနေ စချင်သည်။ နောက်ထပ် လောင်ကျွမ်းစရာ မလိုတော့။
အမှောင်က ညနေပျိုကို လောကကြီးအား လက်ဆောင်ပေးလိုက်သည်။ အလားကားရတော့ လောကကြီးကလည်း ခပ်တည်တည်နှင့် လက်ခံလိုက်သည်။ ဒါကပဲ မုန်တိုင်းရဲ့ အစ ဖြစ်ခဲ့တော့တယ်။ ပင်လယ်က သူနှင့် သူ့လှေကလေးကို စတင် ကျီစားပြီ။ လေပြည်က တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပြင်းထန်လာပြီး ကောင်းကင်က အတင်းကြီး မှောင်ညစ်ပြနေသည်။ မာယာ…………………..။ သူနှင့်ရင်နှီးနေသော စကားလုံး။ အ၀တ်အစား၏မာယာ၊ အလှတရား၏ မာယာ၊ ၀က်သားတုတ်ထိုး၏ မာယာ၊ ချစ်သူ၏ မာယာ၊ အပြုံး၏ မာယာ၊ နပိုလီယန်၏ စစ်ပရိယာယ်မာယာ၊ လောက၏ မာယာ၊ အရာအားလုံး၌ ရှိသော မာယာ။ မာယာ၏ မာယာ။ ယခု… သူ့ကို ပင်လယ်ပြင်က…မာယာပြပြီ။ ကချေသည်က. အကကွက် တွေကို တစ်ကွက်ခြင်း ထုတ်ပြသလိုမျိုး…. မာယာတွေကို လွှာချပြနေသည်။ လေပြင်းက ငြိမ်သွားပြန်ပြီ။ အမှောင်ကတော့ နောက်ထပ်ပြန်မလင်း နိုင်တော့သော အခြေအနေ။ မုန်တိုင်းကျတော့မှာလား…။ သူ့စိတ်တွေ ခြောက်ခြားသွားသည်။ ယိုင်နဲ့နေသော ခန္ဓာကိုယ်ကို တည့်မတ်ရင်း သူ့ကိုယ်သူ အားတင်းကြည့်သည်။ မရ…. ။ သူ အနည်းငယ်စိတ်ပျက်သွားသည်။ ဒီတစ်ခေါက် မုန်တိုင်းကျလျှင် သူတော့ သေပြီဟုထင်နေသည် (သို့မဟုတ်) သိနေသည်။ ရုတ်တရက် သူ့မြင်ကွင်းထဲမှာ သင်္ဘောတစ်စင်း….။ ဟုတ်တယ် ..အဲ့ဒါသင်္ဘော ပဲ။ သူ့အပျော်တွေ အရောင်လက်သွားသည်။ လှော်တက်ကို ကောက်မ လိုက်ပြီး ထိုသင်္ဘောဆီသို သူ စတင်လှော်ခတ်လိုက်သည်။ မျှော်လင့်ချက် များကတော့ သူ့ရင်နှင့် အပြည့်။ သင်္ဘောကလည်း သူ့ဆီ လာနေပုံရသည်။ အားတင်းပြီး ခပ်မြန်မြန် လှော်လိုက်သည်။ မုန်တိုင်းကလည်း သူ့ကို စောင့်မည်မထင်။ သူ လှော်နေသည်။ သူ့လှေ သေးသေးလေး ၏ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ ကြီးမားသော လှိုင်းဂယက်များ အဆက်မပြတ် ထွက်နေသည် အထိ လှော်သည်။ စိတ်လိုတိုင်းတော့ ခရီးမရောက်။ သင်္ဘောက သူ့လှေကလေးကို မြင်သွားပြီး ကယ်တင်ဖို့ သူ့ဖက်ကို ဦးလှည့်လိုက်သည်။ ဟုတ်သည် .. တကယ်လာနေပြီ။ ထို့အတူ ပင်လယ်ကလည်း တပ်မဟာ ပေါင်းများစွာနဲ့ သူ့ဆီလာနေပြီ။ သူစိတ်တွေလည်းအားမလို အားမရ ဖြစ်နေသည်။ ရွှီ.. ဆိုပြီး ခရာ မှုတ်လိုက်လို့ တာထွက်လာတဲ့ အပြေးသမားတွေလိုမျိုး လေရာ . မိုးရော ရွာကျလာသည်။ ကောင်းကင် ကလည်း အနက်ရောင် ပြောင်းသွားလေပြီ။ စပြီ။ သူနှင့် ပင်လယ် တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲ….။ သူ့ ၀ိညာဉ်ကလည်း ဘယ်လို မုန်တိုင်းလာလာ ရိုက်ခွဲ ပစ်ဖို့ အဆင်သင့်။ သူ့ လှေကလေးနှင့် သင်္ဘောကြီးကလည်း အတော်ပင် နီးနေပြီ။ ရုတ်ချည်းဆိုသလို ပင်လယ်က သူ့ကိုယ်သူ မွှေ့ပစ်လိုက်သည်။ ၀ဲဂယက် တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သူ့လှေကလေး ရမ်းခါသွားသည်။ အားစိုက်ပြီး သူလှော်သည်။ တိုက်ပွဲမှာ သူရဲကောင်းက သူ့ဓါးကို မြဲနေအောင် ဆုပ်ကိုင်ထား သလိုပါပဲ… လက်ထဲက လှော်တက်ကလည်း သူ လက်လွှဲရာ လိုက်ပါနေတယ်။ လေထုဖိအား အရမ်းပြင်းလာသောကြောင့် သူ့နားတွေလဲ အူနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဘာသံမှ ကို မကြားနိုင်လောက်တော့တဲ့ အထိ သူ့ခေါင်းတွေ မူးရီနေသည်။ ခဏကြာတော့ ၀ဲဂယက်တစ်ခု ကလွဲပြီး သူ့လှေကလေးနှင့် သင်္ဘောကြီး ကြားမှာ ဘာမှမရှိတော့တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားသည်။ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
နောက်ဆုံး အားအင်တွေသုံးပြီး သူ့လှေကလေးကို အဲ့ဝဲဂယက် ကနေ ဖြတ်ကာ ဖောက်ထွက်ပစ်လိုက် တယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ဲဂယက် က သူ့လှေသေးသေးလေးကို အလွယ်တကူပဲ ဆွဲမွှေ့ပစ်လိုက်တယ်။ သူ့လှေကလေး ချာချာလည်ကာ မြုပ်ချင်ချင် ဖြစ်သွားသည်။ သူ…. ဆက်လှော်တယ်။ သူရယ်၊ သူ့ ၀ိညာဉ်ရယ်၊ လှော်တက်ရယ်၊ လှေကလေး ရယ် တသားထဲ ကျသွားတဲ့အထိ သူ လှော်ပစ်လိုက်တယ်။
………….။ လွတ်သွားပြီး။ အင်း ..ဟုတ်တယ်။ အဲ့ ၀ဲဂယက် ကနေ သူ့လှေကလေး လွတ်သွားပြီ။ အဲ့ဒီမှာ ဖြတ်ခနဲ သင်္ဘောကြီးရဲ့ ကိုယ်ထည်နဲ့ ထိပ်တိုက်သွားတွေ့တယ်။ သင်္ဘောကြီး ကို သူလှမ်းအော်လိုက်တယ်။ သူ ဒီမှာ ရှိကြောင်း..။ ဒါပေမယ့် သူ့ အသံက ထွက်မလာဘူး။ သူ အော်တယ်။ သင်္ဘောကြီးက မကြားဘူး။ အသံက မထွက်တော့ သူအော်နေတာသင်္ဘောကြီးက မကြားဘူး။ ဒါနဲ့ ပဲ .. ပင်လယ်က ပို့ ပေးလိုက်တယ် ထင်ပါရဲ့.. ။ သင်္ဘောကြီး ရဲ့ ဦခေါင်း အောက် သူ့ လှေကလေး ရောက်သွားတယ်။ ‘၀ုန်း……….’ ဆိုတဲ့ အသံ က ခပ်အုပ်အုပ် ထွက်လာတယ်။ ဒါလေးပဲ…..။
ဒါလောက် လေးပါပဲ………..။ နောက်တော့ သူ့ လှေကလေးနဲ့ အတူ သူပါ မြုတ်သွားတယ်။
ပြီးသွားခဲ့ ပြီလေ..။ မုန်တိုင်းလဲ ငြိမ်ကျသွား ပြီ။ သင်္ဘောကြီးကလဲ သူ့လမ်းပေါ် သူပြန်ရောက်သွားပြီ။ ပင်လယ်ကတော့ မုဆိုးဆန်ဆန် ခပ်တည်တည်ရယ်……………………………………………….။
Posted by နရစိုး at 12:43 PM2comments:
ကိုင်းခတ်တွေ ကုန်အောင်ပွင့် ပါရစေ။ တောင်ပေါ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တောင်အောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
ငါရနံ့ နဲ့ ငါ လွင့်ချင်လို့။
‘သံယောဇဉ်ကြိုးတွေ ရှုပ်ကုန်ပြီ’ ဟု ပြောကြသည်။ မည်သူသွားလုပ်လိုက်သနည်း။
ရှုပ်အောင် လုပ်သော သူရှာမတွေ့ပါ။ ထိုအခါ သံယောဇဉ်ကြိုးသည် သူကိုယ်တိုင်ပင် အရှုပ်ထုတ်ကြီး
ပင်လယ်ဓါးပြ များသည် ပင်လယ်ပြင် ၌ ရွက်လွှင့် ကြသည်။ တိမ်များသည်
သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဖွကြဲပြီး ကောင်းကင် ၌ ရွက်လွှင့် ကြသည်။
‘ကောင်းကင် = ပင်လယ်’ ဆိုလျှင် မလွယ်။ တိမ်များ သည် မျက်လုံးတစ်ဖက် ကန်ုးနေပြီး ဓါးတကိုင်ကိုင် နှင့် ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
ဓါးပြ များကတော့ အနည်းဆုံး အသား တွေဖွေးသွားနိုင်သည်။ မလွယ်တော့ မလွယ်။
ဓူဝံကြယ်ကိုတော့ ခူးဆွတ်မပေးနိုင်ဘူး။ ဘုရား ဈေးတန်းက မီးပုံးတွေပဲ တတ်နိုင်တယ်။
ကဲ ချစ်သူရေ… ငါ့ရင်ကိုသာ ဖြုတ် .... ဓူဝံကြယ်လို့ ရေးပြီး ပေးမယ်ကွယ်။
ငါရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဒဏ္ဍာရီ တစ်ပိုဒ်မှာတော့ ‘မီးခွက်ဆိုတာ အလင်းပြပြကို လဲ အာခေါင်မှာ ဆုပ်ကိုင်ရဲတယ်’..။
လာမယ့်နွေအကြောင်း သီချင်းလေးဆိုဖို့ ဥဩငှက် က ဦးမော့လိုက်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ် မသိဘူး။
‘ဖျောင်း…… ….. ဘုတ်’ ဆို ပြီးပဲကြားလိုက်ရတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ပဲ နွေရာသီ တော်တော်များများ
လမ်းလျှောက်ရင် ခဲလုံးတွေပဲ ပိတ်ပိတ်ကန်နေရပြီ။ ဒါဟာ.. ဘ၀ လားတော့ မပြောတတ်ဘူး။
အခန့်မသင့်ရင် ငါ့ရင်ဘတ်တောင် ငါကန်တဲ့ ခဲလုံးဖြစ်သွား နိုင်တယ်။
စကားပြောလျှင် ဒိုင်းများ၊ ဓါးများ ကိုင်ကာ ပြောတတ်ကြသော လူများအား အမြင်ကတ်ပါသည်။
အဝေးက မြင်လျှင်ပင် ခဲ ဖြင့် ထုချင်ပါသည်။
ဘယ်လို နက္ခတ်မျိုးနဲ့ ပွင့်မလဲ မသိဘူး။
ငါ့လက်တံတွေ ချိုးပြီး ကိုင်းဆက်စိုက်ထားတဲ့ ရနံ့မွှေးမွှေးတွေလေ….
ကျိန်စာတွေ တော့ ကင်းစေချင်ရဲ့။
Posted by နရစိုး at 11:02 AM 1 comment:
နှင်း ..ရေ... ... .... ..
တေလေ လေး ရယ်' တဲ့
ဒူးပိုက် ရူးမိုက်မိတဲ့ ကောင်မို့
နွေဦးကျောင်းက ကံ့ကော်ရေ... ... .... ..
သူ .. ငယ် .. ချင်း ကို လွမ်းမိတော့
ကျောင်းသားလေး ဖောက် လို့ ပေး ပါရစေ။
ကျောင်းတံခါး ကို တိတ်တိတ်လေး
ပိတ် ပြစ် လိုက် ပြန်ပြီ
မြင်နေကျ မြေနီ လမ်း လေးမှာ
စံပယ်တွေ လူခိုးခံရ ရော့ မယ်။
သူ့ လယ်သူမ ကို မျှော်နေသလိုမျိုး
စက္ကူလှေ အတွက်တော့ ကျယ် လွန်းတယ်လေ...
အဲ့ဒီတော့ ခပ်ရင့်ရင့်ပဲ မေးမယ်
အမှောင် ခေတ် မှာရော
လမင်း ပွင့် ပေး လို့ ရမလား။
ရွက်တွေ လွှင့်ခဲ့ ရ
ခုံနံပါတ် လေး က
နက္ခတ်များ မှားပွင့် ခဲ့ လေ သလား
သစ်ရွက်တွေ ကို သာ ကုန်အောင် ခြွေပါ
ကျောင်းသားလေး ကိုတော့ ထား ခဲ့ ပါ။
အသည်းကွဲ တယ် ဆို တာ
ခေါင်းလေး ငိုက်ချ ထားရုံနဲ့မှ မပြေနိုင်တာ
နောင်တခေတ် တခါ တော့
အိပ်မက်များ လင်းတောက် နိုင် ကောင်းပါရဲ့.... ..။
Posted by နရစိုး at 10:37 AM No comments:
မြူတွေ ဆိုင်း နေ ဆဲပါ
ဆောက် ခဲ့ရ တဲ့ မြို့လေး
ခု တော့.. စို့ နင့် နေ ရှာ ပြီ.....။
Posted by နရစိုး at 10:21 AM No comments:
ည၌ တစ်ခါတစ်ခါ မိုးရွာ၏။
ထို့ကြောင့် ည၌ မိုးရွာ လျှင် မှောင်၏။
ရစ်မူး နေတဲ့ ည.. က လွမ်းလို့တဲ့..
မိုးစက်ပေါက်တွေ တစ်ဖောင်းဖောင်း ကျ အောင် ..ငိုတယ်။ သူခံစားနေရတာကို လမင်း တစ်လှည့် ကြယ်စင် တစ်လှည့်နဲ့ ကောင်းကင်မှာ စာလုံးပေါင်းပြတယ်။
ပြီးတော့.. အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ ကဗျာ တွေရွတ်..
ဘယ်ညာ ယိမ်းထိုးကာနဲ့.. သူ့ကိုယ်သူ ဒရွတ်တိုက် ဆွဲခေါ်နေတယ်။
“ငါ့ရင် ငါ့နှလုံးသားနဲ့ လွယ်ပြီး မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ အလင်းကွ.. မင်းက လုယူ သွားတာ… .. …” ဘာ ညာ နဲ့….. …… အင်းလေ … သူတစ်ကယ် စိတ်ဆင်းရဲ နေတာကိုး..။
ဖရိုဖရဲ ပျံ့ကြဲနေတဲ့ သဲမှုန်တွေနဲ့ အဘယ် ပင်လယ်ပြင် ကို သွားပြီး ပစ်ပေါက်မလဲ..။
“အလင်း ရယ် ……. ပြန်လာပါ”
သားပျောက် ရှာနေတဲ့ အမေ တစ်ယောက် ရဲ့ ‘သားရေ….’ လို့ ခေါ်သံ လိုမျိုးပေါ့..။
အကြည့်တွေက အစ ရှိုက်သံ စွက်နေ လေရဲ့.။
ကြာတော့လည်း နွမ်းချိလာတယ်။ တုန်ရီနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက တော့ “အလင်း ရေ”လို့ ရေရွတ် နေ တုန်းပဲ။
သိပ်ထက်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဓါးတစ်လက် ကတောင် သူ့ဓါးအိမ် ကို သူ ပြန် မခုတ် ဘူးလေ…။
ဒါပေမယ့်.. အလင်း က တော့ အဲ့လို မဟုတ်ခဲ့ဘူး။
……. ……. …….. ……..့
ဒီလိုနဲ့.. အချိန်တွေ ဟောင်း .နေ့တွေ ပြောင်း.
ည .ဆိုတဲ့ကောင် ကတော့ .. ခုထိ မှောင် တုန်း ပေါ့။
အ်ိပ်မက်တွေကို ပုတ်ပြီး သိပ်နေမိတယ်
မိုးကလေး ရေ.. တိတ်ပါကွယ်
ခပ် စိပ်စိပ်လေး ကြား တယ်..။
Posted by နရစိုး at 7:27 AM No comments: